Hiran State - News: Tix gabay ah oo loogu jawaabayey Gen.Subxaanyo iyo beesha uu ka soo jeedo kedib markii uu aflagaadeeyey reer Hiiraan
Tix gabay ah oo loogu jawaabayey Gen.Subxaanyo iyo beesha uu ka soo jeedo kedib markii uu aflagaadeeyey reer Hiiraan
HS:- Mudo labaatan sano kedib waxii boob dalka loo geystay iyadoo xitaa biyahii wabiga leyska iibiyey hadane kuwii dhibtaasi geystay ayaa 21 sano kedib dadkii intey Suit iyo Tay u xirtaan magacyadiina bedesheen jiilkasta isku dayeya iney qaldaan.
Dib uguma laabaneyno waxa uu yahay C/qadir Cali Mire oo la baxay Gen Subxaanyo. laakinse maadama uu ku xad gudbay reer Hiiraan inta laga gaarayo inuu raali gelin ka bixiyo waxaanu shacabka u soo bandhigeynaa dadka arin Somaliyeed ka hadlaya ee qaranimadu waxey tahay ka hadlaya ee hadane guryaha ay Somaliya ka dagan yahiin iyo beeraha boobka ku heysto oo waxkasta oo xun oo qabiil Somaliyeed loogu yeeri lahaa loogu yeeray hadane walito il adeyg la soo taagan iyadoo ay walito taariikhdii mugdiga aheyd ee ay wadanka galiyeen aysan shacabka ka tirtirmin, hadane waxaanu si horudhac ah u soo daabacnay tix gabay ah oo aanu soo koobnay mudo kala duwana la tiriyey kana hadleysaa reerka uu ninkani ka soo jeedo bal si degan u dhuux miraheeda.
Sidoo kale waxaanu soo wadnaa muuqaalo ay intooda badan ka geysteen Somaliya iyo qudbado aanu soo koobnay oo xiligii colaadaha laga duubay shaqsiyaad reerkaani ka soo jeeda kedibna bal si degan isku weydii in dad noocaan ah iney qaranimo ka hadlaan iyo in kale laga dhageysto mudan yahiin.
Gabaygiina waakan laakinse maalmaha soo socda waxaad u daawan doontaan isagoo dheer qaab muuqaal ah.
Dal ragii lahaa nool yahay ow dooxa miranayaayo doqonimadu waa waxey u tiri weyska tagayaane.Maqabaan tashiga ruux u darsiyo taladu sidey noqon dersigii markaas taaganey wada daneeyaane.Nin waliba markow soo dalaco kiisku daba joogo, macirkey ku duulaan tolow ciidu degi maane.Somali nimey daaqilaan malahan dowgaane.
Dirac meelo yaaliyo waxii dacas la boobaayey digsi iyo Falaas maran waxii deegta lagu qaatay.waa duul habaarweyn qaboo daali mahayaane,Ibliis baa durbaanka u sidoo weys dalaciyaane.Hadii Tooshka lala raadinaa daanka laga saaro, ma is duugayaan reerka waa loo danleeyahaye.Ma cirkey ku duulaan ragow ciida degi maane. Somali nimey daaqilaan malan dowgaane.
Gabay kale oo isaguna ina soo gaaray maanta meelo badan oo xasaasi ah ayuu taabanayaa laakinse meelahii ugu jilcanaa ee aanu is dhahnay dadweynaha waa loo bandhigi karaa ayaanu ka soo qaadanay inta kale waqtigeedii lama gaarin waa in horta dhacdooyin badan oo horey loo soo maray la soo nooleeyo kediba intii laga gaari karo laga jawaabo sida ka muuqata gabayga laakinse bal tixdaan nala arag.
Duulkaan habaaran Somali maahan kuna xumeyn maaye. dumarkooda lama xirto oo lama xalaashiisto xaashaa lilaahiye beejadii baa xeero la egaatay.
Waxuuna abwaanka qeybta ugu danbeeysa ee gabayga ku muujinayaa sida uu uga xun yahay wiilka amaba gebedha ilaah calafkooda ka dhigay reerkaan ee .......................
Ugu danbeyn waxaanu soo wadnaa gabay isaguna gaar ah oo ka hadlaya C/qadir Cali Mire .General Subxaanyo. marka aanu muuqalka 1aad soo deyno isagaa dan ugu qasbanaan doona inuu raali galin ka bixiyo gafka uu u geystay reer Hiiraan.
La soco qoraalada ku saabsan arintaan inta cudur daar laga bixinayo
· admin on July 30 2011 05:03:56 · 0 Comments · 4131 Reads ·
14,584,499 unique visits